इटहरी गोल्ड कप कसले जित्ला : थ्री स्टारकी मनाङ ? | Hamro Khelkud
इटहरी गोल्ड कप कसले जित्ला : थ्री स्टारकी मनाङ ?
इटहरी (हाम्रो खेलकुद)– मदन भण्डारी स्मृति इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको शनिबार हुने फाइनल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ । जहाँ घरेलु फुटबलमा लामो र सफल इतिहास बोकेका दुई टोली लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब र रुस्लान थ्री स्टार क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
झन्डै डेढ वर्षपछि घरेलु फुटबलमा पुनरागमन गरेयता थ्री स्टार पहिलो पटक फाइनल खेल्दैछ । अर्को तिर पछिल्लो दुई वर्षमा मनाङ लगातार उपाधि दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । गत वर्ष सर्वाधिक ४ वटा नकआउट उपाधि जितेको मनाङले यो वर्ष पनि ४ फाइनल खेल्दा २ उपाधि जितिसकेको छ ।
यो वर्ष मनाङले चितवनमा जेसिज कप र दुहबी गोल्ड कपको उपाधि जितेको थियो । सताक्षी गोल्डकप र मेची नेत्रालय काकरभिट्टा गोल्ड कपको फाइनलमा भने मनाङ विभागिय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पराजित भएको थियो । पुनरागमनपछिको पहिलो प्रतियोगितामा क्वार्टरफाइनल भन्दा अघि बढ्न नसकेको थ्री स्टारले इटहरीमा भने सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको छ ।
धनगढीमा नेपाल आइस सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको क्वार्टरफाइनलमा आर्मीसँग पराजित थ्री स्टारले यसपटक त्यहि आर्मीलाई सेमिफाइनलमा आर्मीलाई हराएको थियो । जसले टोलीलाई उपाधिको दाबेदार मान्न सकिन्छ । २०७२ को राष्ट्रिय लिगको च्याम्पियनका हैसियतमा एएफसी कपको पहिलो चरण पार गरेपनि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को गल्तिका कारण थ्री स्टारले दोस्रो चरण खेल्न पाएन ।
जसको विरोध स्वरुप थ्री स्टारले ६ करोड रुपैयाँ क्षेतिपूर्ति माग गर्दै एन्फाले आयोजना गर्ने र स्वकृति प्रतियोगिता नखेल्ने निर्णय गर्यो । जसका कारण टोलीले कुनै पनि घरेलु प्रतियोगिता खेलेन । अन्ततः १ करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षेतिपूर्ति दिन एन्फाको विशेष साधारण सभाले निर्णय गरेपछि थ्री स्टार घरेलु फुटबलमा गत महिना फर्केको थियो ।
अर्को तिर वर्षको तेस्रो उपाधि उचाल्ने योजनामा रहेको मनाङका लागि जापानबाट हालै स्वदेश फर्केका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सन्तोष साहुखल बलियो हतियार हुन सक्दछन् । उनले भारतीय क्लबविरुद्धको सेमिफाइनलमा २ गोल गर्दै आफुमा अझै क्षमता रहेको संकेत दिइसकेका छन् ।
सर्वाधिक पुरस्कार राशी १२ लाख रुपैयाँ पुरस्कार राशीको उपाधिका लागि अझै केही घन्टा प्रतिक्षा गर्नुपर्ने भएपनि दुवै टोलीका प्रशिक्षकले भने दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।
मनाङका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङले फाइनल खेल्न टोली उत्साहित रहेको बताएका छन् । ‘थ्री स्टार राम्रो टोली हो र उनीहरु बलियो टोली हुन्’, प्रि म्याच कन्फ्रेन्समा आज उनले भने, ‘सन्तोषको उपस्थितिले हामीलाई थप उर्जा दिएको छ । हामीले मेहेनत गरेर खेल्नु पर्दछ र मौकामा गोल गर्नुपर्दछ । सन्तोष जानुअघि थ्री स्टारमा आबद्ध थिए ।’
अर्को तिर थ्री स्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले पनि टोलीका लागि फाइनल महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हामी डेढ वर्षपछि फुटबलमा फर्केका छौं ‘, उनले भने, ‘त्यसकारण समर्थकलाई खुसी पार्न पनि हामीलाई उपाधिको आवश्यकता छ । फाइनल पक्कै कठिन हुनेछ । तर, उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ उपाधि जित्ने हाम्रो योजना छ ।’प्रतियोगिताको उपविजेताले ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने सर्वौत्कृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल पाउनेछन् ।